Kubatanidza Dhijitari Kushambadzira muRubatsiro Rwako | Martech Zone
Kushambadzira kutsigira kunopa kukosha kwakakosha kupfuura kwekuonekwa kwechiratidzo uye traffic traffic Vatengesi vane hunyanzvi nhasi vari kutsvaga kuwana zvakanakisa kubva kutsigiro, uye imwe nzira yekuita izvi kushandisa mabhenefiti einjini yekutsvaga. Kuti uvandudze rutsigiro rwekushambadzira neSEO, unofanirwa kuona mhando dzakasiyana dzekutsigira dziripo uye nzira dzakakosha dzinodiwa pakuongorora kukosha kweSEO.
Chinyakare Midhiya - Dhinda, TV, Radio
Tsigiro kuburikidza neyakajairwa midhiya inowanzo kuuya nenzira yekushambadzira kuisirwa kana mhenyu mvumo pazvirongwa (semuenzaniso, "Meseji iyi inounzwa kwauri ne…"). Kunyangwe iyi ingave iri nzira huru yekutyaira vashandisi kuwebhusaiti yako, ine zvishoma SEO kukosha mukati mawo.
Asi zvakadaro zvinokwanisika kuwedzera simba resaiti traffic kutsigira yako SEO matanho. Semuenzaniso, kana iwe uri kupa tarisiro zvinokurudzirwa zvekushanyira webhusaiti yako kuburikidza nerubatsiro, vape iwo mukana wekugovana peji ravanotumira kuburikidza nenzira dzakadai sekudyidzana kugovana mabhatani uye email. Zvemagariro zvikamu zvinogona kutumira "masaini" kumashure kumajini ekutsvaga uye nekupa mukana wekuti vanhu vabatanidze vadzokere pawebhusaiti yako kuburikidza nemamwe masosi semablog nemaforamu.
Kushambadzira kunogona kupa yakakura SEO kukosha kana yakarongedzwa uye yaitwa nemazvo. Iko kune kwakakosha kufunga kana uchitaura nezve kukosha kweyekushambadzira.
PageRank - Kunyangwe Google isingakwanise kuisa yakawanda sosi sezvavaimboita muPageRank, kukosha kwacho hakuna kuenda zvachose. Iyo ichiri imwe yedzakanakisa nzira dzekuona simba rezvinobuda zvinongedzo pane imwe webhusaiti.
Relevancy - Mawebhusaiti anobatanidza kumashure kwauri akanakisa kana aine chiremera uye achikodzera. Kana zvichikwanisika, shandisa iyo SEO simba rekubatanidza vanobatana nezviri mukati zvine chekuita neako indasitiri uye zvigadzirwa / masevhisi.
Kunze Kwakabatana - Izvi zvinowanzo kuverengerwa metric, asi imwe iri kukura mukukosha sezvo Google ichigadzirisa maalgorithms avo. Iyo yakakwira vhoriyamu yezvinobuda zvinongedzo kubva pawebhusaiti inogona kuoneka "spammy" kune yekutsvaga injini. Kana iwe ukapihwa wekushambadzira uye peji rako remukati rinogara pariri rakazadzwa neGoogle Adsense kana zvinongedzo kune imwe Sponsors, ingave iri zano rakanaka kupasa.
Zvemagariro Media Kutsigira
Zvemagariro midhiya yekutsigira inogona kutakura SEO kukosha, uye kukanganisa kwavo paSEO kunogona kuwedzera sezvo masocial network achiramba achiwedzera. Kana iwe ukapihwa yakatsigirwa Tweet kana Facebook posvo sechikamu chekudyidzana, iwe unofanirwa kuyera kukosha mune yakajairika metric.
Iyi kambani ine yakakwira vhoriyamu yevateveri veTwitter kana Facebook vateveri? Zvichida zvakanyanya kukosha, vane huwandu hwehukama hwehukama pakati penhengo dzemunharaunda? Kana iwe ukafunga kutsvaga rutsigiro runosanganisira zvemagariro midhiya zvataurwa, ita shuwa kunyora iyo Tweet kana Facebook posvo uine SEO mupfungwa.
Sanganisira chigadzirwa kana mazita ebasa iwe aunotarisa paari, pamwe neiyo link back kune yako webhusaiti. Kuzivikanwa ndeimwe yemasaini akakosha anotumirwa kunjini dzekutsvaga kubva kumasocial network. Ita shuwa kuti yako yemagariro midhiya timu iri kuumbazve tweeting kana kugovana zvinyowani kutyaira kwakanyanya kuita kwazvinogona.
Ramba uchifunga kuti injini dzekutsvaga dzinoverenga masocial network uye dzinozviti izvi kune kwako kwese webhusaiti kufarirwa, asi kukosha kuchadzikira kana ukasaramba uchitumira aya masaini. Edza kuwana rubatsiro runosimudzira mhando yako kuburikidza nemagariro enhau nenzira inowirirana.
Vhidhiyo kutsigira inowanzouya iri muchimiro che pre-roll kana padyo padyo yekushambadzira pane vhidhiyo yakavakirwa masosi enzvimbo. Kuiswa kwemashambadziro akadai seaya anogona kutumira traffic kuwebhusaiti yako, asi iwo ane zvishoma SEO kukosha kupfuura izvo- kunze kwekunge mukana wevhidhiyo wekutsigira uri pane inozivikanwa, yepamusoro-traffic saiti senge Youtube.
Kuti utange, tarisa newaungangodanana naye kuti aone kana vachizopa chinongedzo chisingaperi kwauri mukati merondedzero yevhidhiyo. Kana zvichikwanisika, iyi link inofanira kukomberedzwa nerondedzero yepeji iri kubatanidza kune (inosanganisira 1 kana 2 target keywords) pamwe neiyi link ine keyword-rich anchor chinyorwa.
Zvakakosha kuratidza kuti zvinongedzo kubva kumasocial media saiti seYouTube zvinoonekwa se "kwete-kutevera," zvakadaro, vazhinji vedu mune iyo SEO munda tinotenda kuti hapana-anoteedzana maratidziro kubva munharaunda ave kuve anokosha, uye senge zvataurwa pamusoro pasocial media. muenzaniso wekutsigira, ucharamba uchikura mune ramangwana.
Madhairekitori / Sponsorship Zvinyorwa
Mazhinji mapakeji ekutsigira anosanganisira zvinyorwa mukati me "Sponsors" chikamu pane webhusaiti yemumwe wako. Aya mapeji ekunyorwa anogona kuita zvakafanana kune madhairekitori, ayo nhasi achiri kupa yakakura SEO mukana. Pane akati wandei ekufunga kwakakomba kwemapeji akadai seaya;
PageRank - Sezvakataurwa muchikamu chekushambadzira, tarisa iyo PageRank yewebhusaiti iyo inozoisa iwe mune yakatsaurwa yekutsigira chikamu- iyo yepamusoro, iri nani.
Tsananguro uye maLinks - Edza kuve nechokwadi kuti haungoratidzwe pane peji rinotsigira, asi kuti iwe unewo dudziro uye uine chinyorwa chinodzosera kune yako webhusaiti. Logos inowanzo iri nzira iri nyore yekumisikidza aya mapeji. Chinongedzo kubva kuchiratidzo chinotakura imwe kukosha, asi iwe unonyatsoda kutsvaga chinyorwa chinobatanidza uye kana zvichibvira, nyora tsananguro yetsika yebhizinesi rako, zvigadzirwa, nezvimwe (zvine kiyi yekutarisisa).
Mukupedzisa, kutsigira kunogona kutakura kukosha kweSEO kana yaongororwa nekuitwa nemazvo. Wese mukana wekutsigira wakasarudzika, uye yega yekumisikidza kurudziro inofanira kuve tsika.
Tags: advertisingBacklinksDirectoriesLinkszvinobuda zvinongedzopagerankdhindaredhiyokukoshamagariro enhau anotsigirakutsigira nemarizvetsika vezvenhautvvhidhiyo kutsigira
Nei Infographics Gadzira Makuru Ekushambadzira Maturu
Gumiguru 11, 2012 na2: 07 PM
Takave nemhedzisiro inoshamisa pamwe nevatsigiri vedu paKushambadzira Tekinoroji Blog uye nekuramba tichiita vatinotarisira zvakanyanya. Mukuonga, isu tinogara tichisimudzira makambani avo nemasevhisi - nepo tichiratidza hukama hwedu hongu. Ini ndinofunga kutsigira chirongwa chakanakisa icho mamwe makambani anoda kutora mukana. Mari yekutsigira yatakawana kubhuku reKushambadzira Technology inoenderera ichitibvumidza isu kuisa mari mukusimudzira saiti nekuwana imwe traffic - iyo, zvakare, inotyaira kutarisisa kune vatinotsigira. Nzvimbo huru, Thomas!
Gumiguru 11, 2012 na8: 16 PM
Radio uye terevhizheni kushambadza kuchiri kushanda nanhasi? Huye, rutsigiro rwakanakisa asi runofanira kuongororwa zvakare kunyanya kana iwe uchiisa imwe mari yakananga kubva muhomwe yako sekudyara kwako. Zvinotora nguva kusarudza kuti ndeapi mapoinzi auchange uchitsigira kuti uwane kubatsirwa nawo.